उच्च शिक्षा हासिल गर्न बिदेशिएका युवा किन फर्कंदैनन् स्वदेश ? यस्तो छ कारण ! - Arthatantra.com
उच्च शिक्षा हासिल गर्न बिदेशिएका युवा किन फर्कंदैनन् स्वदेश ? यस्तो छ कारण !
हरेक ब्यक्ती हमेसा जीवनपर्यन्त अबसरको खोजिमा लागि रहेको हुन्छ । यो गरेर हुन्छ कि त्यो गरेर हुन्छ भन्दै मनमा अनेक तरङ्ग खेलाउँदै जीवन जिउने गर्द्छ । जो कोहि अर्थात औँशिको रातमा पनि जुनको खोजिमा हुन्छ मान्छे ।
यसरी नै अबसरको आशमा अहिले नेपाली युवाहरू प्रबास जाने क्रम बढीरहेको छ । हरेक प्रक्रियाबाट दिन दिनै युवाहरू युरोप अमेरिका प्रवेशको क्रम यथाबत छ । युवाहरु बिदेशीनुको प्रमुख कारण राजनैतिक बितृष्णा, बेरोजगारी अनि थेग्न नसक्ने महँगी नै हो । हरेक शिलशिलामा शिक्षा ग्रहण गर्ने उद्देश्य वा ब्यापार अनि कामको शिलशिलामा निश्चित अबधिको लागि युरोप अमेरिका प्रवेश गरे पनि हत्पत् युवाहरु मातृभुमी फर्किनुको सट्टा प्रबासमा आधिकारिक रुपमा स्थापित हुने विभिन्न बाटोहरु खोजिराखेका हुन्छन् ।
कुनै पनि युवा आफूमा प्रखर छ, क्षमतावान छ, योग्य छ, सक्षम छ भने अनि आधिकारिक रुपमा बसेको छ भने उस्को कामको र सक्षमताको कदर बिदेशमा पनि हुन्छ नै । प्रबासमा पनि नेपाली हरु, बैंकर, राज्दुत, ब्यापारी, प्रबक्ता, नर्स, डाक्टर, शिक्षक जस्ता प्रशंसनिय काममा आबद्ध छ्न् । प्रबासमा जो कोहि नेपालीलार्इ लोभाउने कारण यहाँको समान नीति नियम र कुनै पनि ब्यक्तिलार्इ रोजगारको लागि राजनैतिक अथवा नाताबाद्ले छुन नसक्ने हो । काममा निपुर्ण अनि भाषाको ज्ञान, इमान्दार भएपछि आफ्नो परिश्रमको कदर सँधै हुन्छ । बिदेसमा । युरोप अमेरिकामा प्रबेश गरेका युवाहरु विशेष गरेर अल्झनुको कारण पनि यहि हो ।
विकसित मुलुकमा प्रबेस गरिसके पछि कुनै पनि युवाहरू माझीको जालमा माछा परेको जस्तै हरपल उम्कन प्रयत्न त गरिराख्छ, तर उम्कन धेरै कठिन हुन्छ । चुम्बकले फलामलाई ताने जस्तो गरि हरेक कुराले प्रबासिलार्इ प्रबासले तानिराखेको हुन्छ । बिकसित देशको लोभ्याउने नीति नियम, मानव अधिकार, शान्ती सुरक्षा, सेवा सुबिधा, कामदारलार्इ गरिएको आदर सत्कार, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य सुबिधा, परिश्रमको आधारमा सुबिधा विभिन्न कुराहरुले युवाहरूलाई प्रबासले अल्झाइ राखेको हुन्छ । हुनत बिदेश गएका जति पनि युवाहरुलार्इ हाम्रो समाजम जति सुकै शिक्षा लिएको भए पनि बिदेशमा भाँडा माझ्ने त होनि भनेर यदाकदा हेपिएको सुनिन्छ तर कुनै पनि युवा आफूमा प्रखर छ, क्षमतावान छ, योग्य छ, सक्षम छ भने अनि आधिकारिक रुपमा बसेको छ भने उस्को कामको र सक्षमताको कदर बिदेशमा पनि हुन्छ नै । प्रबासमा पनि नेपालीहरु, बैंकर, राजदुत, ब्यापारी, प्रबक्ता, नर्स, डाक्टर, शिक्षक जस्ता प्रशंसनिय काममा आबद्ध छ्न् । प्रबासमा जो कोहि नेपालीलार्इ लोभाउने कारण यहाँको समान नीति नियम र कुनै पनि ब्यक्तिलार्इ रोजगारको लागि राजनैतिक अथवा नाताबाद्ले छुन नसक्ने हो ।
काममा निपुर्ण अनि भाषाको ज्ञान, इमान्दार भएपछि आफ्नो परिश्रमको कदर सँधै हुन्छ बिदेशमा । युरोप अमेरिकामा प्रबेश गरेका युवाहरु विशेष गरेर अल्झनुको कारण पनि यहि हो । सभ्यता, सुरक्षा, सुबिधा र मानव अधिकारले जो कोहि युवालार्इ आधिकारिक रुपमा प्रबासमा स्थापित हुन बाध्य बनाउँछ । प्रदेशमा बस्न मन नरमाए पनि छोडेर जाने निर्णय गर्न पनि नसक्ने हुन्छ ।
प्रबासमा जो कोहि नेपाली युबाहरु आर्थिक उपार्जन गर्नु मात्र नभएर यहाँको भाषा, सँस्कृती, चालचलन, रितिरिबाज, सभ्यता सिक्ने मुख्या पाठशाल पनि हो । जीवन के हो, संघर्ष के हो भन्ने सिकार्इ प्रबासले सिकाउँछ । विभिन्न प्रबिधिको ज्ञान् पनि प्रबासले दिन्छ अनि हाम्रो भाषा, सँस्कृतीलाई पनि जो नेपाली जहाँ पुगेको छ त्यहाँ उस्ले आफ्नो सँस्कृती चिनाएको हुन्छ ।
हरेक प्रबासी युवाहरूले जतिसुकै सुबिधा लिए पनि उसलाई आफ्नो मातृभुमी जस्तो प्यारो केही पनि हुन्न देश दुख्ने धेरै प्रबासिलार्इ नै हो । पलपल पर्व अनि बुवा आमाको मायाले घायल बनाएको हुन्छ प्रबासिलार्इ । सायद प्रबासमा अभाव भनेको नै आफन्तको आफन्तपन हो जो कोहिलाई ।
२१ मंसिर २०७३
Keshsv raj ghimire
Miss lekheko lekh paddha dharei ramro ra bastabik n harek pardasi ko matra haina mero man ko kura lekheko jasto Lago thank you so much.?????????
बिपन खालिङ्ग राई
सहि कुरा हो कला पन्थ जि
Yo kura sahi lagyo malai bastabikta yai ho aafnu des ra pariwar prati maya hunchha Tara teti matra bhayera jiban Ma pugdaina ra aafu le pani k hi garnu parchha kamaunu parxa pachi Ko pusta lai pani k hi gari Dina paye bhanne hamro soch ho tei bhayera sabai bides Ma basne. Manche Ko sochai ra badyadha le Garda yasto huna gayeko ho jasto lagchha mero bichar Ma chai…